"Marathon De Paris" : Hikatsaka tapakilan’ny lalao olympika ry Hajanirina sy Clarisse
Hitady tapakila ho any Londres, amin’ny alalan’ny fifaninanana atao any Paris Frantsa i Hajanirina Andriamparany sy Clarisse Rasoarizay.
Ny « Marathon de Paris » andiany faha-36, izay hotontosaina amin’ny 15 avrily ho avy izao no hiandrandran’izy ireo an’izany tapakila izany. 2 ora sy 18 minitra ny fe-potoana farany ambany (minima) takiana ho an’ny sokajy lehilahy, raha 2 ora 43 minitra izany ho an’ny vehivavy. Hibaby ny laharana 65 sy 225 eo amin’ny sokajin’ireo atleta efa voky traikefa (sokajy elita) izy mianadahy ireo mandritr aizany. Hatramin’ny faran’ny volana novambra lasa teo dia efa nahatratra 40 000 ireo mpandray anjara amin’ity hazakazaka lavitra ezaka tontosaina any Parisy ity.
Ao anatin’ny fanomanantena tanteraka izy mianadahy ireo, izay eo ambany fitarihan’i Mahatana Jean De la Croix(mpanzatra nasionaly eo amin’ny hazakazaka lavitra ezaka). Raha ny fandaharam-potoanan’izy ireo dia hiainga roa na telo andro mialoha ny fifaninanana izy ireo mba hahafahany mizatra ny toetany sy ny lalana hizoran’ny fifaninanana any Frantsa. « Ilaina fahatongavana mialoha amin’ny fifaninanana tahaka izao satria io dia efa mety hampiena ny fahaiza-manao, indrindra amin’ny hazakaza lavitra ezaka », hoy iry mpanazatra ity.
Mialoha an’io anefa dia mbola hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny « semi-marathon » izy mianadahy ireo. « Atao hanomanana io fifaninanana iraisam-pirenena any Parisy io izy ity. Ny tsy fisian’ny fifaninanam-pirenena ho an’ny Cross Country aza efa tsy fidiny », hoy i Hajanirina Andriamparany, izay tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny Marathon.